राप्रपा महाधिवेशन : नेतृत्व र विचारमाथि उठेका प्रश्न
– जनकराज पाठक
वि.सं. २०४६ को परिवर्तन पछि ०४७ जेठ १५ गते एकै दिन दुई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) स्थापना भएका थिए । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु अधिराज्य, अखण्ड नेपाललाई मुल लक्ष्य मानेर लामो समयको पञ्चायती व्यवस्थालाई सफल नेतृत्व दिएका नेताहरूले पार्टी स्थापना गरेका थिए । राप्रपा स्थापनाको छोटो समयमा नै राप्रपालाई मुलुकको शक्तिशाली मध्यमार्गी दलको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएका थिए । तर, बिडम्बना पछिल्लो तीन दशको कालखण्डमा राप्रपामा निकै पटक विभाजन आयो । राप्रपा खण्डित हुँदा स्थापनाकालमा लिइएका सबै उद्देश्यहरु पनि हराउने स्थितिमा पुग्यो ।
आजको एकीकृत राप्रपा अब इतिहासमै कहिल्यै नफुटने गरि हिन्दुहरुको आधार ग्रन्थ गीतालाई साक्षी राखेर एक भएको छ । यो एकीकृत राप्रपाको मंसिर १५ गतेदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु भएको छ । नीति र सिद्धान्तमा एकरूपता भएको दलभित्र महाधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा नेतृत्वको लागि छलफल र बहस हुनु स्वभाविक हो । एउटा जिवन्त दलभित्र नेतृत्वको विषयमा सामान्य उल्झनहरु देखिनु सकारात्मक पनि हो । राप्रपालाई निरन्तर नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु, नेतृत्वको मौका नपाएका नेता र नयाँ, युवापुस्ताबीच कसले राप्रपालाई नेतृत्व दिने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यता दुई दलबीचको एकीकरण पछि हुन लागेको अधिवेशनलाई सर्वसम्मत नेतृत्व दिएर एकताको सन्देश दिनुपर्ने देशभरिका कार्यकर्ताहरुको चाहाना पनि छ ।
नेतृत्व भन्ने वित्तिकै हामी व्यक्तिमा मात्र केन्द्रीत हुन्छौं । प्रजातन्त्रको यत्रो वर्षहरुमा हामीले प्रजातन्त्रको व्याख्या, विश्लेषण त निकै गरेका हौँ तर हामीले आन्तरिक रुपमा हामीमा प्रजातन्त्र छ, छैन, हाम्रो चरित्र प्रजातान्त्रिक हो, हैन अनि हामीले स्थापित गराउन खोजेको नेतृत्वले कस्तो चरित्र बोकेको छ ? यसबारे बहस गरेनौ । सत्ता केन्द्रीत राजनीति, शक्ति संघर्षका लागिमात्र हामी अगाडि बढिरहेको कारण हाम्रो साख पनि गरिरहेको त हैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
दलले बोकेको ठोस, विचार, नीति र सिद्धान्तलाई इमान्दारीपूर्वक प्रजातान्त्रिक ढंगले गन्तव्यमा पु¥याउने कार्यकारी पद नेतृत्व हो । यो वैज्ञानिक युगमा नेतृत्वको विषयलाई व्यक्तिमा मात्र सिमित राख्नु गलत हुन्छ । मात्र व्यक्ति केन्द्रीत नेतृत्वको बहस युग सुहाउँदो हुँदैन । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि वर्तमान युग सुहाउँदो, भविष्य प्रष्ट देखाउन सक्ने, समूहका अव्यवस्थित क्रियाकलापलाई एउटै आकारमा ल्याएर व्यवस्थित ढंगले सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न कार्यकारी पद पनि हो नेतृत्व तर, यस्तो नेतृत्व व्यक्तिसँग जोडिएको उसको शैलीमा भरपर्छ ।
व्यक्तिगत जीवनशैली समेत साधारण रहने यस्तो नेतृत्वले कार्यकर्ताहरुलाई सर्वमान्य ठान्दै मित्रवत व्यवहार गर्छन् । कार्यकर्ताहरु दास हैन अंशियार हुन् भन्ने चिन्तन भएका यस्ता नेतृत्वले दललाई विशेष स्थानमा पु¥याएर विश्राम लिने गर्छन् । आजको युगमा दलले बोकेको पवित्र उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको विकल्प छैन । करनि र कथनिमा समानता रहने यस्तो नेताले नेतृत्व गरेको दल वर्तमान युग सुहाउँदो पनि हुन्छ र यसले सफलता पनि प्राप्त गर्छ । अझ विशेषतः सबै कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र आफु पनि अन्य सरह नै काम गर्ने क्षमता यस्तो नेतृत्वमा पाइन्छ ।
तसर्थ, राप्रपाको महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषयमा घनिभुत छलफल गरौँ । कस्तो शैली, आचरण, व्यवहार भएको नेतालाई राप्रपाको नेतृत्व दिने हो ? त्यो अवसर तपाईं, हाम्रो हातमा छ । वर्तमान युग सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक नेतालाई हामीले नेतृत्व दिन सकेनौ भने हाम्रो आउँदो राजनीतिक दिनहरु पनि अँध्यारो नै रहनेछन । राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेछैन् । राप्रपालाई सफल बनाएर त्यसको जगमा हामीले आफ्नो भविष्य खोजेका हाँै भने नजिकिएको महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्ने कुरा छान्न इतिहासले हामीलाई सुवर्णं अवसर प्रदान गरेको छ । हतार र आवेशमा होइन शान्त मनस्थितिले आवश्यकताअनुरुपको कामहरु हामीले गर्ने हो भने राप्रपा पनि सफल हुन्छ र हाम्रो भविष्य पनि सुरक्षित रहन्छ ।